Ama-Indianapolis Colts | Martech Zone
NgoMgqibelo, Juni 3, 2006 NgoMgqibelo, July 12, 2014 Douglas Karr
NgoLwesihlanu, ngibe nelungelo lokuhambela umhlangano namanye amafemu amelwe kahle kakhulu nabaholi bezimboni bendawo ukuze sisebenzisane namaColts emizamweni yabo eqhubekayo yokuthi "Make it Personal" nabalandeli babo. Le yinhlangano enhle kakhulu futhi bangihlonipha kakhulu. Basebenzisa zonke izinsiza abangazibamba ukuze bathuthukise ubudlelwano nabalandeli babo, futhi babasondeze enhlanganweni ngangokunokwenzeka. Esikhundleni sokungena emshinini wemali, ngibona kusengaphambili ukuthi amaColts azoba “Ithimba LaseMelika” ngenxa yokholo lwawo enhlanganweni, kanye nokwazisa ngabalandeli abasebenze kanzima futhi.
Ukuqhubekela phambili, ngisebenza namanye amafemu amaningi ukusiza ukuhlanganisa ama-CRM awo, iWebhu, i-Web Analytics, i-imeyili, i-eCommerce, futhi mhlawumbe nezinhlelo zokufaka amathikithi ukuze amaColts afunde kabanzi ngomlandeli ngamunye, akhulume nawo uqobo , futhi ubanikeze amathuba okusungula iqembu abalithandayo njengoba bengakaze babe nalo ngaphambili.
Tags: Ama-AnalyticsCRMezokuhweba ngekhompyuthaimeyiliindianapolis coltskwenze kube ngokwakhonflUkunikezwa ithikithi
Ngizifisela usuku lokuzalwa!
Isikhumba sami seWimpy ku-MyJonesSoda.com